Ihe eji eme ihe maka ndị na-emepụta ngwa ọrụ - China Ntucha Ntucha Maka Ọkachamara Ngwaahịa & Ndị Na-ebubata ya
Kpọọ Anyị: 0086-13937187660
Sịntetik Diamond ntụ ntụ
HPHT ụlọ nyocha toro Diamond
Emechara Cut Diamond
Hụrụ Grit Diamond
Metal nkekọ ntupu Diamond
Nkume Nkume Nkume
Non-Crystalline ntupu Diamond
Resin nkekọ Diamond
Resin nkekọ ntupu Size
Cubic Boron Nitride (CBN) ntupu
Micron Diamond ntụ ntụ
General Nzuzo Ngwa
CBN Micron Nha
Ihe mkpuchi ọla
Diamond polishing onyinye
Polycrystalline Diamond kọmpat (PDC)
Ihe eji eme ihe maka nzube zuru oke
Ihe eji eme ihe maka ihe eji eme ihe
SND-R15 Standard ọkwa Bloc ...
SND-R10 Economy ọkwa ọkwa -...
A20 Golden Agba CBN Abrasi ...
SND-G10 Yellow RVD gbụrụ ...
SND-M15 Nnukwu Ihe Ike Synt ...
SND-M10 Sịntetik Micron Di ...
MBD8 ntupu Size 80 / 100-325 / 4 ...
MBD10 High Siri Ike Ọma S ...
FCZ925 Per Alloyed Metal Powder Jiri For Granite Muti Cutting Blades
FCZ925 Per Alloyed Metal Powder used For Granite Muti Cutting Blades 1. Gini bu ihe eji eme ka ihe ndi ozo di ike, enweghi ike imeghari ya ma choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ihe atụ kachasị mma bụ igwe nchara, whos ...
FCNS03 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder maka Efere Diamond Agụba
FCNS03 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder for Ceramic Diamond Blade 1. Gini bu ihe eji eme ka ihe ndi ozo di ike, enweghi ike imeghari ya ma choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ezigbo ihe atụ bụ igwe anaghị agba nchara, onye chr ...
CCS25 FeCuSn Ihe eji emechi emezi maka ure marble
Gịnị bụ CCS25 tupu alloyed metal ntụ ntụ? CCS25 bụ Cu, Co, Sn mejupụtara tupu alloyed ntụ ntụ, nke nwere ezi, edo na kọmpat sintering Ọdịdị, nwere oké wetting na-ejide ikike na diamond, suitale maka mepụta elu àgwà marble ọnwụ agụba. 2. Ngalaba nke CSS25 ntụ ntụ Isi Element Cu, Co, Sn Theoretical Density 8.29g / cm³ Ọnọdụ Okpomọkụ 760 ℃ Ike Mkpụrụ 800 MPa Hardness 85-95HRB 3. Applicationaiton Instuctions —Marking a marble sa ...
FCCS07 FeCuCoSn Nga Alloyed Metal Powde maka Ọkara na High Quality Diamond Ngwaọrụ
FCCS07 FeCuCoSn Pre Alloyed Metal Powde for Medium to High Quality Diamond Tools 1. Gini bu ihe eji eme ka ihe di nkpa karie ike, enweghi ike imeghari ya ma choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ihe atụ kachasị mma bụ igwe anaghị agba nchara ...
FCC58 FeCoCu Pre alloyed Metal Powder For High Quality Diamond Ngwaọrụ
FCC58 FeCoCu Pre Alloyed Metal Powder For High Quality Diamond Tools 1. Gini bu ihe eji eme ihe ndi ozo bu ihe siri ike, enweghi ike ichota ya ma choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ihe atụ kachasị mma bụ igwe nchara, whos ...
FCP321 Pre-alloyed Powder For Medium Diamita Granite Saw Blade
FCP321 Powder Powder For Medium Diamita Granite Saw Blade 1. Gini bu ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo siri ike, ndi adighi adi nma ma ya mere choro ibu ndi ozo karie iji meputa otutu ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ezigbo ihe atụ bụ igwe anaghị agba nchara, onye chr ...
CCS25 Cu Co Sn Sn Prealloyed Powder maka High Quality Marble Saw Blade
CCS25 Cu Co Sn Prealloyed Powder for High Quality Marble Saw Blade 1. Gini bu ihe eji eme ihe ndi ozo bu ihe siri ike, enweghi ike ichota ya ma choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ihe atụ kachasị mma bụ igwe anaghị agba nchara, onye ...
FCNS06 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder maka Ceramic Squaring Wheel
FCNS06 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder for Ceramic Squaring Wheel 1. Gini bu ihe eji eme ka ihe ndi ozo di ike, enweghi ike ichota ma ya mere choro ibu di elu iji meputa ihe di elu. Otú ọ dị, ha nwere ike ịmịpụta ihe ndị nwere ike dị elu. A na-ejikwa alloy eme ihe mgbe ị na-emepụta ihe ndị yiri ya sitere na ntụpọ elemental chọrọ oke okpomọkụ na oge ịkwa ụda dị ogologo. Ezigbo ihe atụ bụ igwe anaghị agba nchara, onye ch ...
Ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ anyị email gị ma anyị ga-enwe mkparịta ụka n'ime awa 24.ase
9 Yunshan Road, High-Tech District, Zhengzhou, Henan, 450000, China